Muuqaal caawiyaha garsooraha VAR iyo kooxda Liverpool ma ahan kuwa isku fiican xilli ciyaareedkan iyadoo dhowr jeer oo hore ay Reds dhibco ku weyso go’aamo waa weyn oo ay gaareen garsoorayaasha maamula VAR ee Premier League.
Kulankii maanta ee Amex Stadium oo Liverpool laga beeniyay seddexda dhibcood waqtigii dhimashada ciyaarta, waxaa diirada ay saarneyd VAR oo gaartay go’aamo saameyn weyn ku yeeshay natiijada ciyaarta.
Kooxda martida loo ahaa ayaa waxaa soo martay fursad dahabi ah markii Neco Williams uu rigoore ku galay Aaron Connolly ciyaarta oo socota 20 daqiiqo, laakiin Neal Maupay ayaa rigoorada banaanka marsiiyay.
Ka dib VAR waxay diiday gool uu Liverpool u dhaliyay Mohamed Salah, iyadoo qeybtii labaad uu Jota hogaanka u dhiibay Reds laakiin Mane oo u muuqday inuu dhaliyay goolkii labaad ee Liverpool ayaa hadana waxaa diiday VAR.
Waqtigii dhimashada ciyaarta Andy Robertson ayaa qalad ku galay Danny Welbeck isagoo ka haraantiyay cagta xilli uu doonayay inuu kubad bixiyo.
Garsoore Stuart Attwell ayaa dhacdada ka eegay shaashada dhinac taala garoonka isagoo go’aamiyay inay rigoore aheyd, waxaana rigoorada saxiixa Gross oo dhibic u soo celiyay kooxda Brighton.
Macalinka Liverpool oo dhawaanahaan ka cabanayay jadwalka horyaalka iyo isticmaalka VAR ayaa u muuqday mid ka careysan go’aanada VAR ee maanta isagoo sacab kajan ah sameeyay markii kooxdiisa rigooradii ugu danbeysay laga dhigay.
What occurs to your physique while you eat chocolate